Pyae Phyo (MMiTD): ♪ Discount တွေချပေးနေတဲ့ Eastern iT and Mobile မှ ASUS Laptop များ ♫
♪ Discount တွေချပေးနေတဲ့ Eastern iT and Mobile မှ ASUS Laptop များ ♫
ASUS Discount 15US~30US 😍
Eastern Discount 10US~60US 😋
➡️2Years Official Warranty
➡️ Engineering / Video Editing Software များ
(y) Aeon နဲ့ installment ၀ယ်နိုင်သလို,
.....AYA / CB /KBZ Credit Card များဖြင့်လည်း ၀ယ်ယူနိုင်ပါသည်။
နယ်မှ ၀ယ်လိုသူ Customer များအတွက် လိုအပ်တဲ့ Software များ အပြည့်စုံထည့်ပေးပြီး ပါဆယ်သေချာထုတ်ပိုးပေးပြီး ကားဂိတ်ကနေတဆင့် ပို့ ပေးတာမို့ယုံကြည် စိတ်ချ စိတ်ချမ်းသာစွာမှာယူနိုင်ပါတယ် ^_^
(1) ASUS X441SA
500GB / 4GB DDR3/ DVD RW
intel HD Graphic / 14'' LED
WiFi,Webcam,BT,3Cell Battery.
မူလရောင်းဈေး--> 299 US
Eastern Discount --> 20 US ^_^
Discount ချပြီးဈေးနှုန်း--> 279US (379,000Ks)
Word, Excel , Power Point , ရုံးလုပ်ငန်းသုံး software များကို
ကောင်းကောင်းအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး internet / Email / DVD ကြည့်ခြင်းစတာတွေကို အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။
(2) ASUS X441NA (Pentium)
500GB / 4GB DDR3 / DVD RW
WiFi , WebCam , BT,3 Cell Battery.
မူလရောင်းဈေး--> 339 US
Eastern Discount --> 15 US ^_^
Discount ချပြီးဈေးနှုန်း--> 324US (440,000 Ks ၀န်းကျင် )
(3) ASUS A456UR (i3 7th Gen) (Limited Stock!!!!!!)
4GB DDR4 , 500GB HDD, DVD RW
Nvidia GT 930 2GB Graphic,
14" LED Display ,
WiFi , WebCam,2Cell Polymer Battery.
မူလရောင်းဈေး--> 509 US
Eastern Discount --> 60US ^_^
Discount ချပြီးဈေးနှုန်း--> 449US (610,000Ks)
နောက်ဆုံးပေါ် Core i3 7th generation processor နဲ့ Nivida Graphic 2GB ပါတဲ့အပြင် မြန်နှုန်းမြင့် DDR4 RAM ကိုသုံးထားပါတယ်။ 2GB Graphic လဲပါဝင်တာမို့ Dota2 လို Game နဲ့ Engineering Software တွေသုံးဖို့အတွက် သင့်တော်ပါတယ်။
(4) ASUS X541UJ-DM482
500GB / 4GB DDR4/ DVD RW
Nvidia GT920 2GB Graphic
15.6'' LED , WiFi, Webcam, BT
မူလရောင်းဈေး--> 599 US
Eastern Discount --> 10US ^_^
Discount ချပြီးဈေးနှုန်း--> 569US (773,000 Ks)
နောက်ဆုံးပေါ် Core i5 7thGen ကိုအသုံးပြုထားပြီး ၊ Nvidia 2GB Graphic ပါဝင်တာမို့ Video Editing / AutoCad /3D Max / Revit စတဲ့ software တွေနဲ့ Dota2 လို 3D Game တွေကစားဖို့အတွက် သင့်တော်ပါတယ်။
(5) ASUS A556UQ (i5 7th Gen) (Limited Stock!!!!!!)
15.6'' LED FULL HD 😍
WiFi , WebCam, BT 4.0
2 Cell Polymer .
မူလရောင်းဈေး--> 629 US
Eastern Discount --> 35US ^_^
Discount ချပြီးဈေးနှုန်း--> 594US (807,000 Ks)
နောက်ဆုံးထွက် Core i5 7th Gen နဲ့ Nvidia GT940 2GB Graphic ပါဝင်တာမို့ Dota2Game / Racing Game များနဲ့ AutoCad/ 3D Max/ Revit စတဲ့ Engineering Software တွေအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။
(6) ASUS X541UJ-DM664 (i7 7thGen)
1TB HDD / 4GB DDR4 / DVD RW
15.6'' Full HD 😍 / WiFi /WebCam / BT
မူလရောင်းဈေး--> 709 US
Eastern Discount --> 15US ^_^
Discount ချပြီးဈေးနှုန်း--> 664US (903,000 Ks)
နောက်ဆုံးပေါ် Core i7 7th Gen ကိုအသုံးပြုထားပြီး Nvidia GT920 2GB Graphic ပါဝင်တာမို့ Video Editing / AutoCad/ 3D Max /Revit စတဲ့ software တွေနဲ့ Dota2လိုGame တွေကစားဖို့အတွက် အဆင်ပြေမယ့် Laptop လေးပါ။ Full HD လဲပါဝင်တာမို့ ရုပ်ထွက်ကလဲ ကောင်းမှကောင်းပါပဲ.။
(7) ASUS A556UQ (i7 7th Gen)
8GB DDR4 , 1TB HDD, DVD RW
Nvidia GT940 2GB DDR3 Graphic,
15.6" Display, WiFi , WebCam, Bluetooth.
2 Cell Polymer Battery.
Color: Gold Plastic,Dark Brown,Dark Blue
Eastern Discount --> 20US
Discount ချပြီးဈေးနှုန်း 689US --> 937,000 Ks ၀န်းကျင်
နောက်ဆုံးပေါ် Core i7 7th gen processor ကို RAM 8GB နဲ့ မေးနေသူများအတွက် ရွေးချယ်သင့်တဲ့ Laptop လေးပါ။
15.6'' အရွယ်အစားရှိတာမို့ Game တွေပဲဆော့ဆော့၊ Engineering လုပ်ငန်းတွေ သုံးချင်ရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အဆင်ပြေစေမှာပါ။
(8) ASUS UX330CA (Zen Book)
Core M3 - 7Y30
SSD 128GB / 4GB DDR3/ intel HD
13.3'' LED , WiFi , Webcam, BT
မူလရောင်းဈေး--> 699 US
ASUS Discount--> 15US
Eastern Discount --> 10US
Discount ချပြီးဈေးနှုန်း 674US --> 916,000 Ks ၀န်းကျင်
အပါးဆုံး Laptop လေးကို Style ကျကျကိုင်ချင်တယ်..ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ကိုင်ချင်သူများအတွက် ရွေးချယ်ရမယ့် နာမည်ကျော် ZenBook လေးပါပဲ။
Eastern 3) (လှိုင်)တိုက်အမှတ်(51/B1)(အခန်း 001)၊ ရန်ကုန်အင်းစိန်လမ်းမကြီး။ ဘူတာရုံမှတ်တိုင် နှင့် သုခမှတ်တိုင်ကြား ၊ ဟိန္ဒူ ဘုရားကျောင်းမျက်စောင်းထိုး။ ဖုန်း 01-516115 , 09 969 773 107